Sina 1940-19 * 40W loha mihetsiketsika maso mihetsiketsika miaraka amina fanamboarana sy famokarana sy famokarana | Mihoatra
1940-19 * 40W loha be mihetsiketsika maso mihetsiketsika sy mihodina
19 * 40W lohan-tantely be loha mihetsika mihetsiketsika sy mihodina ankehitriny 1940 dia mihoatra ny vokatra faharoa, nohavaozina miaraka amin'ny habe kely kokoa, lanja maivana kokoa, rafitra milamina kokoa. Ankoatra ny henan-tantely 19x40w taranaka voalohany dia natomboka an-tsena ny taona 2016, io no orinasa voalohany ao Shina izay namolavola, namolavola ary nanamboatra ny jiro 40W & 60W tarihin-tantely tantely any China. Ny iray amin'izao fotoana izao hitantsika izao dia ny maso kely tantely kely indrindra sy maivana indrindra amin'ny tsenan'ny sinoa.
Loko manankarena 19 mahery RGBW LED dia afaka mamorona hazavana manasa manja miaraka amin'ny tetezamita malama tsara noho ny rafitra fanamaivanana LED 16bit anatiny. Ny effets vidéo mavitrika dia mora azo amin'ny alàlan'ny fanaovana sarintany piksely tsirairay
Fanamarinana: CE RoHS
19 * 40W loha mihetsiketsika maso mihetsiketsika miaraka amin'ny zoom sy mihodina
Izahay no orinasa voalohany any Sina izay manomboka R&D ary mamokatra ny jiro vokatry ny maso tantely 40W & 60W. Ary ireto jiro karazana ireto dia amidy tsara hatramin'ny 2016 aorian'ny nanombohana ny tsena, ireto mason-tantely 19x40W ireto dia nampiharina tamin'ny Korea Olaimpika Winter 2018 sy fampisehoana malaza sy lehibe. Raha ampitahaina amin'ny mason-tantely 19x40w voalohany (ny vokatra misy ankehitriny dia mampiasa vahaolana mitovy amin'izany), ny mason-tantely 19x40w vaovao izay jerenao dia kely kokoa, tsy dia maivana, milamina kokoa ary manamboatra mora kokoa. Mora ny miasa manamboatra hidin-trano sy hidin-kazo mahasarika mahatonga azy ireo tena mety amin'ny fampiasana, mitondra ary mametraka.
Loharano nateraka 19 * 40W rgbw 4in1 Led Fanapahan-kevitra Pan / Tilt 8/16 kely
Sudin'ny zana-kazo 3 ° - 45 ° fanendasana 540 ° / 630 °
Fanjifana herinaratra 750W Jery ​​​​mitongilana 270 °
Fomba fanaraha-maso DMX512 / Master-Slaver / Auto-Run / Sound / RDM miseho Fampisehoana loko TFT mahatratra 1,8 mirefy 180 ° azo ovaina
Mode DMX 21/23/35/78/92/97 / 99CH Data ao amin'ny foibe / Out Socket XRL 3-pin & 5-pin
Toetoetra Socket Power PowerCon miditra / mivoaka
LED fanaraha-maso tokana Naoty fiarovana IP20
afaka mampiseho zana-tsipika, isa, litera ary lamina famaritana
Rafitra optika avo lenta lafiny 376x280x418.5 mm; NW: 16,5 kilao
vokatra voninkazo mahafinaritra miampy zoom Fonosana mahazatra: baoritra; tranga sidina raha azo atao
Ny hafainganam-pandehan'ny fiasan'ny fiara dia azo ovaina amin'ny hafanan'ny loha Fanamarinana
Napetraka ny hook hook CE, ROHS
Antsipirian'ny teknolojia momba ny vokatra
Teo aloha: 760-7x60W borosy fanasan-damba sy tantely tantely vokany nitarika loha mihetsika amin'ny varotra mafana
Manaraka: 2720-IP65 valin-drihana fanasan-damba amin'ny strobo ivelany miaraka amin'ny 960 × 0.2W Led